> Resource> iTunes> Top 3 iTunes Ụra Ngụoge
Ọtụtụ music hụrụ nwere ike na-enweghị music. N'ihi ya, ọbụna ha na-aga na-ehi ụra, ha mkpa ha na-ehi ụra ka ha-awụ ọsọ n'ugwu. Ọ bụ ezigbo àgwà n'ihi na ị nwere ike a elu mma ụra. Ebe a 3 iTunes ụra ngụ oge na-ẹkenam. Ha ga-etinye ma gị na Mac na-ehi ụra mgbe ọgwụgwụ nke music.
iTunes Ngụoge - Mac Dashboard ngwaọrụ
Nke a Mac OS X dashboard wijetị ka ị na-enwe na-ege ntị music, akwụkwọ ọdịyo, pọdkastị, redio na iTunes ruo mgbe ngụda zuru ezu. Mgbe arụnyere, dị na-eji ihe mmịfe mmanya ịtọ ngụda na pịa green bọtịnụ iji malite ngụ oge.
Na ọzọ nhọrọ, i nwere ike ịchịkwa QuickTime, DVD Player na-etinye gị Mac ụra mode.
iTunes Ụra Ngụoge - Yahoo ngwaọrụ
Nke a bụ a Yahoo ngwaọrụ dabeere iTunes ụra ngụ oge maka free. Mgbe ẹkedọhọde oge oge zuru ezu, ọ kwụsịtụrụ na iTunes mere na ị pụrụ nrọ n'ihi na ike nke abalị. Ka iTunes Ruth gị na kpọmkwem oge, i kwesịrị ọzọ Yahoo wijetị akpọ iTunes Oti mkpu na Elekere. Lee ihe iTunes wijetị si Yahoo.
iSleep - Ụra Ngụoge na mkpu Elekere
Nke a na-akwụ ụgwọ ($ 9) iTunes ụra ngụ oge na ihe atụmatụ, eg, na-eji a DVD kama nke na-akpọ music, na-eche maka ihe nkiri na-akwụsị tupu na-aga bed, wdg Ọ bụrụ na gị Mac bụ oké ụzụ, na-etinye gị Mac-ehi ụra a jụụ ndabere na-azọpụta ike.
Download iSleep ebe a
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na iTunes ndabere faịlụ